Soomaali / Cuntada Bilaashka Ah Ama Qiimaha Jaban
Iskuulada degmada 742 ayaa bixiya cuno caafimaad leh maalin kasta. Sanad dugsiyeedka 2017-2018, Qiimaha quraacda Iskuulada Hoose waa $ 1.60 iyo kharashka qadada oo ah $ 2.65. Qiimaha quraacda Iskuulada sare waa $ 1.65 iyo kharashka qadada oo ah $ 2.85. caano, qado qabow / qiimaha caano dheeraad ah, cuno fudud waa .45 dhamaan ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegin heerka xaaladda qadada ah.
Carruurtaada waxaa lagayaabo inay uqalman cunto bilaash ah ama qiima jaban Iskuulka. Si aad u codsato, soo buuxi foomka Arjiga Gargaarka Waxbarashada ee raacsan tilmaamaha. Waa in arji cusub la soo gudbiyaa sanad kasta. Iskuulada dadweynaha, codsigaaga sidoo kale Iskuulada wuxuu ka caawinayaa xaq u yeelashada lacagta waxbarashada iyo kharash dhimista. HASOO GUDBININ ARGIGA CODSIGA HADDII AAD HESHAY WARQADA FAA'IDOOYINKA KA HOR INTA AAN LABILAABIN ISKUULKA. Haddii aad heshay warqada faa'idooyinka waxaad u baahan tahay in aadan wax dheeraad ah sameynin, marka laga reebo inaad warqadaasi heysatid mooyee.
Lacagta gobolka ayaa loogutalagalay in lagu gargaaro si loogu bixiyo cuntada qiimaha jaban ee Iskuulada, sidaa darted dhamaan ardayda kuwa loo ogolaaday cuntada iskuulka bilaashka ah ama mida qiimaha jaban ayaa waxay heli doonaan cunto Iskuulka oo lacag la'aanta ah. lacagaha gobolka waxaa sidoo kale lagucaawiyaa in lagu bixiyo quraacda ardayda xanaanada, sidaa darted dhamaan ardayda yar yar ee kaqeybgalaysa fasalada (Kindergarten) si ay u helaan quraac lacag laa’an ah.
Ku noqo Codsiga gargaarka ah ee aad soo buuxisay ( QOYSKIIBA HAL CODSIGA GAARGAARKA ) Waxbarashda:
ISD 742 Nutritional Services Dept
St. Cloud MN 56303-2037
Yaa xaq u leh ama heli kara cuntada bilaashka ah ee Iskuulda?
Caruurta ka qeyb qaadata barnaamijyada gargaarka caawinta nafaqeynta cuntada (SNAP), Qorshaha Maalgelinta Qoyska Minnesota (MFIP), ama Barnaamijka Qaybinta Cuntada ee Deegaanka Hindida (FDPIR), soo galootiga, guri la'aan, ilmaha kataga ama ka carara huriga ayaa waxay heli karaan cunto bilassha aha iyagoo aanan soo sheeging ama wergalinin dhakhliga qoyska. Sidoo kale , carruurta waxay ka heli karaan cunto bilaash ah Iskuulka haddii dakhliga qoyska uu u dhaxeeyo dakhliga ku cad tirada qoyska ay yihiin.
Waxaan helaa baranaamijka WIC. Carruurtayda miyeey heli karayaan cuntada bilaashka ah ee Iskuulka?
Caruurta ka qeybqaadaneysa barnaamijka WIC waxaa lagayaabaa in ay xaq uyeeshaan Cuntada bilaashka ah ee Iskuulka. Fadlan buuxi arjiga gargaarka. Lambarka kiiska WIC micnihiisa ma aha inaad u qalantid barnaamijka.
Malaga yaabaa inaan Codsado hadii qof katirsan qoyskayaga aanan aheyn wadani Mareykan ah ?
Haa . Adiga ama carruurtaada ma aha inaad ahaatan WADANI MAREYKAN AH carruurtaada inay u qalmaan cunto bilaash ah ama qiimaha jaban ee Iskuulka.
Yaan ku daraa oo ka mid ah sida xubnaha qoyska?
Ku dar adiga iyo dhammaan dadka kale ee aqalka ama guriga ku nool , qaraabada ah ama aan ahayn (sida ayeeyo , qaraabada kale , ama saaxiibada ).
Maxaa dhacaya haddii dakhligaygu uusan markasta isku mid ahayn?
Liiska ku qor tirada aad caadi ahaan aad heshid. Hadii aad heshid waqti dheeraad ah, fadlan ku dar, laakiin maya hadaada heshid waqti dheeraad ah waqtiyada qaar.
Macluumaadka aan bixiyo mala hubin karaa ?
Haa, oo waxaan weliba sidoo kale codsan doonaa in aad soo dirto cadeyn qoraal ah.
Sidee macluumaadkan lagu ilaalin karaa ?
Macluumaadka aad ku bixinayso foomka, iyo xaaladda loo oggolaanayo canuggaaga faa'iidooyinka cuntada Iskuulka , waxaa loo ilaalinaya sida xogta gaarka ah. Xaaladda oggolaashada canuggaaga ee faa'iidooyinka cuntada Iskuulka waxaa laga yaabaa in lala wadaago waaxaha kale ee nafaqada , waxbarashada ama barnaamijyada caafimaadka kale ee bixiya macaash ku saleysan ansixinta cuntada Iskuulka - wixii macluumaad ah ee dheeraad ah ka eeg bogga dambe ee Arjiga Gargaarka Waxbarashada.
Wixii macluumaad dheeraad ah ama su'aalo ah fadlan soo wac lambarkan: 320-202-6872.